उत्तम दर्ता एजेन्ट सेवाहरू
प्रत्येक राज्यसँग व्यवसायका लागि दर्ता एजेन्ट हुनु कानूनी दायित्व हुन्छ। यो स्टार्टअपहरू, साना व्यवसायहरू, LLC हरू, र कर्पोरेसनहरूको लागि सत्य हो।
एक दर्ता एजेन्ट के हो?
रेजिष्ट्रेन्ट एजेन्टहरू कहिलेकाँही "प्रक्रिया एजेन्ट" वा "वैधानिक एजेन्ट" भनेर चिनिन्छन्।
यी सेवाहरूले तपाईंको अपरेसनको स्टार्ट-अप र दीर्घ-अवधि प्रक्रियाको बखत तपाईंको राज्यको साथ पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू तपाईंको समयमा सरकारी एजेन्सीहरूसँग पत्राचार गर्नका लागि व्यापार घन्टाको बखत उपलब्ध हुन्छन्।
यदि तपाईंको व्यवसायमा मुद्दा चलाइन्छ भने, तपाईंको दर्ता गरिएको एजेन्टको शारीरिक ठेगाना यो हुन्छ जहाँ ग्राहकहरू, कर्मचारीहरू आदिको अगाडि कार्यालयको सट्टामा। ।)।
रेजिष्टर्ड एजेन्ट सेवा कायम गर्न असफलता तपाईको व्यवसायलाई हानिकारक हुन सक्छ। केहि अवस्थाहरूमा, राज्यले यसको दर्ता एजेन्ट सेवाहरूको म्याद समाप्त गर्न अनुमति दिनको लागि व्यवसाय विघटन गर्न सक्दछ।
इनकेहि राज्यहरू तपाइँ तपाइँको आफ्नो दर्ता एजेन्ट को रूप मा कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको मतलब यो हो कि तपाईंले यी जिम्मेवारीहरू लिनुपर्नेछ र सधैं व्यापार घण्टाको समयमा उपलब्ध हुनेछ। यसले सार्वजनिकमा तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी पनि उजागर गर्दछ, जुन धेरै व्यक्तिहरू बेवास्ता गर्न चाहन्छन्।
यसैले रेजिष्टर्ड एजेन्ट सेवाहरू यति लोकप्रिय छन्। चाहे तपाइँ नयाँ व्यवसाय सुरू गर्दै हुनुहुन्छ वा तपाइँको दर्ता गरिएको एजेन्ट परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, यस गाईडले तपाइँलाई तपाइँको व्यवसायको लागि उत्तम दर्ता गरिएको एजेन्ट सेवा फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
शीर्ष Reg पंजीकृत एजेन्ट सेवा
उत्तर पश्चिम आरए $ १२
बाट हस्तान्तरण नि: शुल्क मेल g
पूर्व भरिएको स्थिति फारामहरू
"पंजीकृत एजेन्ट" नामको साथaदेख्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। > उत्तर पश्चिमी रेजिष्ट्रेन्ट एजेन्ट
हाम्रो सूचीमा यत्तिको माथि छ। कम्पनी गाईडहरूसँग तपाईंको व्यवसाय कायम राख्न तपाईको व्यवसाय सुरुदेखि नै यस प्रदायकको रेजिष्ट्रेटेड एजेन्ट सेवाहरू कुनै पछाडि छैनन्। LLCs र निगमहरूको लागि, उत्तर पश्चिम दर्ता एजेन्ट विचार गर्न पहिलो विकल्प हुनेछ।
उनीहरूसँग सबै चीजहरू छन् जुन तपाईले चाहानु भएको हुन सक्छ वा दर्ता गरिएको एजेन्ट सेवाको साथ चाहिएको। योजनाले लाभहरू समावेश गर्दछ जस्तै:
वार्षिक रिपोर्ट अनुस्मारकहरू
कागजात स्क्यानिंग र भण्डारण
सेल्फ-सेवा अनलाइन पहुँच गर्नुहोस्
नि: शुल्क मेल फर्वार्डिंग
उही दिनको स्थानीय स्क्यानहरू
तपाईं उत्तर-पश्चिम रेजिष्टर्ड एजेन्ट गाइड कम्पनीबाट आजीवन समर्थन पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यी बिक्री विज्ञहरूले तपाईंलाई सहयोगका साथ तपाईंको व्यवसाय सुरू गर्न र मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ जुन एक दर्ता एजेन्टको परम्परागत पहुँच भन्दा पर जान्छ।
सेवाको लागत प्रति वर्ष $ १२। छ। यदि तपाईंलाई पाँच वा अधिक राज्यहरूमा दर्ता गरिएको एजेन्ट चाहिएको छ भने, दर १०० डलरमा झर्छ।
नर्थवेस्ट रेजिष्टर्ड एजेन्टबाट सुरू गर्नुहोस्
# २ - इन्फाइल - सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क रेजिष्ट्रेटेड एजेन्ट सेवाहरू
१ बर्षको लागि नि: शुल्क दर्ता एजेन्ट
नविकरण $ ११ <११
स्वचालित मेल फर्वार्डिंग
ईमेल र एसएमएस सचेतहरू
नि: शुल्क सुरू गर्नुहोस्!
व्यवसाय प्रस्ताव सेवाहरूको विस्तृत श्रृंखलाको सेवा हो। यो पछिल्ला १ years बर्षमा ,000००,००० भन्दा बढी व्यवसायहरु द्वारा प्रयोग गरीएको छ। इनफाइल यति लोकप्रिय छ कि एउटा कारण यो हो कि तपाई सित्तैमा दर्ता एजेन्ट प्राप्त गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यो सहि छ। यदि तपाइँ तपाइँको LLC वा कम्पनी बनाउन इन्फाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ पहिलो वर्षको लागि नि: शुल्क रेजिष्टर्ड एजेन्ट पाउनुहुनेछ।
तिनीहरूसँग एन्ट्री-लेभल सिल्भर प्याकेज छ जसको शाब्दिक मूल्य $ ० पर्छ। तपाईले राज्य शुल्क तिर्नु पर्छ। र प्लेटिनम योजनाहरू क्रमश:9१9 and र $ २9at बाट सुरु हुन्छ। तर सबै तीन जना सित्तै दर्ता गरिएको एजेन्टको साथ आउँदछ।
यहाँ इन्फाइलको रेजिष्टर्ड एजेन्ट सेवाका केहि सुविधाहरू र सामर्थ्यहरूमा हेर्नुहोस्।:
आईआरएस मेल पत्राचार र तपाईको तर्फबाट कानूनी कार्यवाही प्राप्त गर्न उपलब्ध
ईमेल र एसएमएस अधिसूचनाहरू जब कागजातहरू प्राप्त गर्दछ
२//7 अनलाईन पहुँच
सरल र सहज अनलाइन ड्यासबोर्ड
अनलाइन ड्यासबोर्ड ईन्फाइल लाइन निश्चित रूपमा आज बजारमा बाँकीबाट अलग छ। मेल फर्वार्डिंग र सतर्कताहरूको बीचमा, यो वास्तवमा अपवादात्मक सेवा हो।
इनफाइलको पंजीकृत एजेन्ट सेवाको लागि मानक मूल्य $ ११ is हो। यदि तपाईं एक व्यवसाय योजनाको लागि साइन अप गर्नुहुन्छ भने, तपाईंको योजना पहिलो मुक्त वर्ष पछि त्यस दरमा नवीकरण हुनेछ।
अवस्थित व्यवसायको साथ तपाईं तिनीहरूका लागि एजेन्ट परिवर्तन शुल्क इन्फिले $ at starts बाट सुरु हुन्छ, राज्य शुल्क।
एक व्यवसाय सुरु गर्न को लागी सावधान रहनुहोस् र नि: शुल्क दर्ता एजेन्ट पाउनुहोस् इनफाइल मार्फत।
#3- स्विफ्ट फिलिings्ग - एजेन सेवाहरूधेरै बहुमुखी दर्ता ts
स्विफ्ट फिलि <्ग्स
एजेन्टहरू $ १9
अनलाइन कागजातहरूमा पहुँच
गोपनीयता र अनुपालनको ग्यारेन्टी
स्विफ्ट फाइलि अर्को दर्ता गरिएको र विश्वस्त नाम दर्ता गरिएको एजेन्ट विश्व हो। तिनीहरूले LLCs, C-Corps, S-Corps, र गैर नाफा नकमाउने संगठनहरूलाई सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
त्यसैले इकाईको प्रकार, तपाईंको व्यवसायको आकार वा तपाईंको उद्योगको गतिविधिलाई ध्यान नदिई यो उत्तम हुनेछ। विचार गर्न विकल्प। Swyft फिलि all्ग सबै 50० राज्यहरुमा उपलब्ध एजेन्ट सेवाहरु पंजीकृत छन्।
सुरू गर्न सजिलो छ। दर्ता गर्नको लागि केवल द्रुत अनलाइन प्रश्नावली पूर्ण गर्नुहोस्। एकचोटि तपाइँ रेजिष्टर भएपछि, Swyft फिलि auto्ग्स स्वचालित टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दछ जसले तपाइँको अनुपालन सुनिश्चित गर्न समयमै अनुस्मारकहरू पठाउँदछ।
सेवा१$ $ मा सुरू हुन्छ र स्वचालित रूपमा नवीकरण हुन्छ। त्यसोभए तपाईले आफ्नो सेवाको म्याद समाप्त हुने बारे चिन्ता लिनु पर्दैन।
तपाईले एकमुष्ठ रकम भुक्तान गर्नुहुन्छ र लुकेको लागत वा अतिरिक्त शुल्कको बारेमा चिन्ता लिनुपर्दैन।
स्विफ्ट फिलि you्ग्सले तपाईलाई अनुमति दिन्छ। सजिलैसँग आधिकारिक कागजातहरू हेर्नुहोस् जुन तपाईंको दर्ता एजेन्टद्वारा अनलाइन अपलोड गरिएको छ। सेवा सुरक्षित, भरपर्दो छ र तपाईंको गोपनीयता लाई सुरक्षित गर्दछ।
यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ कि स्विफ्ट फाइलिंगले तपाईंलाई छनौट गर्नका लागि धेरै व्यावासायिक स्टार्ट-अप योजनाहरू पनि प्रदान गर्दछ। यी प्याकेजहरू केवल $ plus plus प्लस राज्य शुल्कमा शुरू हुन्छन्। जहाँसम्म, यी सेवाहरूमा एक दर्ता एजेन्ट समावेश छैन।
Swyft फिलिंग आज शुरू गर्नुहोस्
#4- ZenBusiness - LLCs को लागि दर्ता सर्वश्रेष्ठ एजेन्ट सेवाहरू
समावेश प्रशिक्षण योजना
अनलाइन कागजातहरूको पहुँच
व्यवसाय निर्माणको क्षेत्र मा एक सबै भन्दा लोकप्रिय र सम्मानित नाम हो। जबकि कम्पनी निश्चित रूपमा उनीहरूको LLC गठन सेवाहरूको लागि परिचित छ, तिनीहरू उत्कृष्ट रेजिष्टर्ड एजेन्ट सेवाहरू पनि प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं ZenBusiness प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ तपाईंको LLC सुरू गर्न, तिनीहरूको पक्षमा एक दर्ता एजेन्ट प्राप्त गर्न समझदारी हुन्छ। यसमा पनि। LLC यसले तपाइँको ब्यापारमा गोपनीयता र सुरक्षाको तह पनि थप्छ।
ZenBusiness सबै कुराको सबै महत्वपूर्ण कानुनी कागजातहरू स्वीकार गर्दछ तपाईको सबै कुराको संगठित अनलाइन ड्यासबोर्डमा अपलोड गरिने छ, प्रिन्ट गर्न वा कुनै पनि समय डाउनलोड गर्नका लागि। पंजीकृत एजेन्ट सेवाहरू प्रति वर्ष year $$ मा सुरू हुन्छ।एक कम्पनीको रूपमा, उनीहरूको दर्ता एजेन्ट सेवाहरू हरेक योजनाको साथ समावेश छन्। यी योजनाहरू $ १२ at मा सुरू हुन्छ, त्यसैले यसले सेवाहरू सँगै बन्डल गर्न समझदारी बनाउँदछ। यदि तपाईं LLC शुरू गर्दै हुनुहुन्छ र दर्ता एजेन्ट चाहानुहुन्छ भने जेनब्युनेस
भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस्।
# - - मेरो कर्पोरेसन - साना व्यवसायका लागि आईडियल
भ्रमण गर्नुहोस् माईको कर्पोरेसन
$ १२० बाट सुरू गर्दै नि: शुल्क EIN जम्मा प्रशिक्षण संग RA केही प्रशिक्षण प्याकेजहरू सहित समावेश नविकरण स्वचालित
२० भन्दा बढी बर्ष भन्दा बढी भएको छ। १ 1998 1998 Since देखि, तिनीहरूले सबै states० राज्यहरूमा एक मिलियन भन्दा बढी व्यवसायहरू सिर्जना गर्न मद्दत गरेका छन्।
यस उद्योगमा अग्रगामी र नेताको रूपमा, माइको कर्पोरेसनको रेजिष्ट्रेटेड एजेन्ट सेवाहरू साना स्टार्ट-अप व्यवसायहरूको लागि उत्तम छन्।
यो सेवाको साथ तपाईं यहाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ:
तपाईंको तर्फबाट आधिकारिक र कानुनी कागजातहरू स्वीकार्नुहोस् तपाईंको कागजातहरू व्यवस्थित गर्नुहोस् व्यवसाय मालिकलाई कानुनी कागजातहरू फर्वार्ड गर्नुहोस्
तपाईंको व्यवसायको लागि प्रोसेसिंग सेवा प्राप्त गर्नुहोस् जब 'कानूनी कार्यवाही
रेजिष्टर्ड एजेन्ट माइकोर्पोरेशनमा सेवाहरू $ १२० मा सुरू हुन्छ। दर प्रत्येक वर्ष स्वत: नवीकरण हुन्छ। तपाइँ तपाइँको योजनामा ​​MyIncGuard पनि थप्न सक्नुहुन्छ, जुन बर्षभर अनुस्मारकहरू र उपकरणहरू समावेश गर्दछ।
तपाइँको नयाँ व्यवसाय सुरू गर्नेहरूको लागि, दर्ता गरिएको एजेन्ट सेवाहरू प्रदान गरिन्छ। डिलक्स र प्रीमियम प्याकेजहरूको साथ मानकको रूपमा। यी क्रमश:4२२4 र $ 4२4 बाट सुरू हुन्छ। यदि तपाइँ तपाइँको व्यवसाय सुरु गर्न माईकोर्पोरेसन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने
तपाईले EIN जम्मा लिनुहुनेछनि: शुल्क
#6- MyCompanyWorks - दर्ता एजेन्टहरू परिवर्तन गर्न को लागी आदर्श
MyCompanyWorks भ्रमण गर्नुहोस्
ing 99 LLC र Corps को लागि कम्पनी प्रशिक्षण १००% सन्तुष्टि ग्यारेन्टी
व्यवसाय निर्माणको क्षेत्र मा अर्को लोकप्रिय विकल्प हो। तिनीहरूले LLCs, c-corps र s-corps को लागी प्रशिक्षण र रेजिस्टर एजेन्ट सेवाहरू प्रदान गर्दछ।
२००१ देखि, राष्ट्रव्यापी 60०,००० भन्दा बढी कम्पनीहरूले उनीहरूको सेवाहरूको लागि MyCompanyWorks लाई विश्वास गर्‍यो।
यस प्रदायकबाट रेजिष्ट्रेटेड एजेन्ट सेवाहरूको फाइदाहरु समावेश: कानूनी अनुपालन सुनिश्चित गर्नुहोस् तपाइँको तर्फबाट मेल प्राप्त गर्नुहोस्
सरल अनलाइन अद्यावधिक गर्नुहोस्
प्रक्रिया, फारमहरू आदि वितरणको लागि तत्काल सूचनाहरू।
तपाईंको व्यक्तिगत oritions र व्यापार जानकारी बीच गोपनीयता को अतिरिक्त तह
पंजीकृत एजेन्ट सेवा at मा सुरू हुन्छ Per 99 प्रति वर्ष।
यदि तपाईंको व्यवसाय पहिले नै स्थापित छ र तपाईं आफ्नो दर्ता एजेन्ट परिवर्तन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, MyCompanyWorks गर्दैन। t परिवर्तनको लागि अतिरिक्त चार्ज।
रेजिष्ट्रेटेड एजेन्ट सेवाहरू पूर्ण ब्यापार स्टार्ट-अप प्याकेजमा पनि समावेश छन्, २9 $ देखि सुरू गरीरहेको छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं अन्य प्रशिक्षण योजनाहरू मध्ये एकमा सेवा थप्न सक्नुहुनेछ, जुन $ $ from बाट शुरू हुन्छ।
योजनाहरू-०-दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी < द्वारा समर्थित छन्।
कसरी फेला पार्नेतपाईंको लागि उत्तम दर्ता गरिएको एजेन्ट सेवाहरू
लोकप्रिय धारणाको विपरित, सबै दर्ता भएका एजेन्ट सेवाहरू समान हुँदैनन्। यी मध्ये केही विकल्पहरू अरू भन्दा निश्चित रूपमा राम्रो हुन्छन्। यति धेरै विकल्पहरू विचार गर्नका साथ तपाईको व्यवसायका लागि उत्तम दर्ता गरिएको एजेन्ट सेवा पाउन गाह्रो हुन सक्छ।
त्यहाँ केही कारकहरू छन् जुन तपाईले बिभिन्न सेवाहरूको मूल्या evalu्कन गर्दा तपाईले विचार गर्नुपर्दछ। नेभिगेट गर्दा निम्न दिमागमा राख्नु तपाईंको जीवन धेरै सजिलो बनाउँदछ:
व्यवसाय एन्टिटीको प्रकार
तपाईं कस्तो प्रकारको व्यवसाय सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? वा हाल तपाईसँग कस्तो प्रकारको संगठन छ?
प्रायः दर्ता एजेन्टहरू सबै प्रकारका संस्थाहरूसँग काम गर्दछन्, तर केहि स्पष्ट रूपमा एउटा भन्दा अर्कोको लागि उपयुक्त छ। LLCs ले S-Corp को रूपमा उस्तै रेजिष्ट्रेटेड एजेन्ट सेवा प्रयोग गर्न सक्दैन। केहि दर्ता एजेन्टहरू संगठनहरू बु गर्नको लागि राम्रो हुन्छन्t गैर नाफामुखी। थोरै गहिरो खन्नुहोस् कुन प्रकारका संस्थाहरू रेजिष्ट्रेन्ट एजेन्टले तपाईसँग काम गर्ने योजना गर्नु भएको छ। यदि तिनीहरू तपाई जस्तो कम्पनीहरूसँग काम गरिरहेका छन् भने यो उत्तम समाधान हुनुपर्दछ।
उत्तम दर्ता गरिएको एजेन्ट सेवाहरूले तपाईलाई राष्ट्रिय कानून र संघीयताको अनुपालन कायम राख्न मद्दत गर्दछ।
एक सेवा खोज्नुहोस् जुन तपाईंलाई SMS वा ईमेल रिमाइन्डरहरू पठाउँनेछ निश्चित गर्न तपाईंले कुनै डेडलाइन वा आवश्यकताहरू छुटाउनु भएको छैन। केहि सेवाहरू थप सामग्री र अनुपालन मार्गनिर्देशनहरूबाट आएका छन्। यो दर्ता गर्न सजिलो छ कि केवल दर्ता गरिएको एजेन्ट सेवा बिचको भिन्नता मात्र कम्तीमा कम्तिमा हुन्छ र ती भन्दा बढि माईलमा जानेहरू।
गोपनीयता मुख्य फाइदाहरू मध्ये एक हो। एक दर्ता एजेन्ट। रेजिष्ट्रेटेड एजेन्टको ठेगाना सार्वजनिक रेकर्डको रूपमा सूचीबद्ध गरिनेछ, तपाईको घर वा कार्यालयको ठेगाना होइन।
कागजातहरूकानूनी र सरकारी पत्राचार तपाईंको पंजीकृत एजेन्ट मार्फत सहज बनाउन सकिन्छ। केहीले केवल मेल भण्डारणको विपरीत मेल फर्वार्डिंग प्रस्ताव गर्दछ। अन्यले सुरक्षित रूपमा अनलाईन ड्यासबोर्डमा कागजात अपलोड गर्दछ जुन तपाईं टाढाबाट पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। दुबै सेवाहरूको लागि केवल एउटा कम्पनी प्रयोग गर्न यसले समझदारी बनाउँदछ।
वास्तवमा धेरै व्यवसाय सुरु सेवाहरूले तपाईंलाई उनीहरूलाई दर्ता एजेन्टको रूपमा प्रयोग गर्न पनि बनाउँदछ। केहि दर्ता एजेन्ट सेवाहरूको नि: शुल्क वर्ष प्रस्ताव गर्दछ जब तपाईं एक स्टार्ट-अप योजनाको लागि साइन अप गर्नुहुन्छ। जस्तो महत्त्वपूर्ण हुनु हुँदैनortant तपाईंको लागि।
रेजिष्ट्रेटेड एजेन्ट सेवाहरूको मूल्य सामान्यतया प्रति वर्ष १०० डलर झर्छ। तपाईले केहि पाउनुहुनेछ more more० अधिक वा कममा। तर सामान्यतया बोल्दै तपाईले धेरै तिर्नु हुँदैन। तर यो गाईडमा समीक्षा गरिएका सेवाहरूको तुलनामा यसले धेरै तिर्ने छ।
यदि तपाईं आफ्नो दर्ता गरिएको एजेन्ट सेवालाई व्यापार सुरूवात योजनाको साथ बन्डल गर्नुहुन्छ (जस्तो कि पहिले उल्लेख गरिएको छ), यो प्राय: उत्तम हो। मूल्य- प्रदर्शन अनुपात।
तपाईको रेजिष्ट्रेन्ट एजेन्ट त्यहाँ हुनु पर्छ तपाईलाई मद्दत गर्न यदि तपाईसँग कुनै प्रश्न छ वा सहयोग चाहिएको छ। यो एक दर्ता सेवा मूल्यांकन एजेन्टको एक महत्त्वपूर्ण र प्राय: बेवास्ता गरिएको पक्ष हो। अन्तिम सिफारिश लिनु अघि तपाईले ग्राहक समीक्षा पढ्न सिफारिस गर्नुहुन्छ। अधिकांश समीक्षकहरूले उल्लेख गरेसहायताको साथ केहि चीज हुनेछ (राम्रो होस् वा नराम्रो)। यी टिप्पणीहरूले तपाईंलाई एक तरीकाले वा अर्को तरिकाले छेड्न मद्दत गर्दछ यदि तपाईं धेरै विकल्पहरूको बीचमा हुनुहुन्छ।
उत्तम दर्ता गरिएको एजेन्ट सेवा के हो? यो तपाईले खोज्नु भएको कुरामा निर्भर गर्दछ।
उत्तर पश्चिमी रेजिष्ट्रेन्ट एजेन्ट ग्राहक सेवाका लागि हाम्रो उच्च छनौट हो किनकि ती माथि र बाहिर जान्छन् तपाईको आवश्यकताहरू पूरा गर्न। इन्फाइलले निःशुल्क पंजीकृत एजेन्ट सेवाहरू प्रस्ताव गर्दछ जब तपाईं व्यापार सुरु प्याकेजको लागि साइन अप गर्नुहुन्छ। स्विफ्ट फिलि्गहरूले सबै प्रकारका व्यवसायिक संस्थाहरूलाई समायोजन गर्ने योजना बनायो।
यदि तपाईं LLC बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, ZenBusiness द्वारा प्रदान गरिएको दर्ता एजेन्ट सेवाहरू जाँच गर्नुहोस्। साना व्यवसायहरू MyCor Corp सेवाहरूमा फर्कनु पर्छ। तपाईं मध्येको रेजिष्ट्रेटेड एजेन्टहरू स्विच गर्न खोज्दै, MyCompanyWorks ले स्विच एजेन्ट शुल्क लिदैन।
तपाईंको व्यवसाय प्रकार वा बीयदि हो भने, तपाई यस गाइडमा सिफारिसहरू अनुसरण गरेर तपाईका लागि उत्तम दर्ता एजेन्ट सेवा पाउन सक्नुहुन्छ।
कसरी शुरुवातकर्ताहरूको लागि वर्डप्रेस साइटमा चरण-चरण गाईड गर्ने
2021-06-24 14:35:51 | वेबसाइट...
वेबसाइट कसरी बनाउने भनेर थाहा पाउन कोशिस गर्दै हुनुहुन्छ? आज तपाईले पत्ता लगाउनु हुनेछ! सयौं वेबसाईटहरू बनाउने र हजारौंलाई मद्दत पुर्‍याउने वेब विकासकर्ताहरूद्वारा सरल, चरण-पछि-चरण वेबसाइट सेटअप गाइड। you'll कारणहरू किन तपाईं यस अद्भुत वेबसाइट सेटअप गाइडलाई मन पराउनुहुन्छ: उपयुक्त शुरुवातकर्ताहरू यो...
११ सब भन्दा राम्रो टेम्पलेट्स [निःशुल्क र प्रीमियम] २०२१
2021-06-24 14:25:56 | वेबसाइट...
सब भन्दा आशाजनक र प्रभावशाली Vuetify मोडेल को लागी तपाइँको खोज समाप्त भयो। हामी तपाईंलाई उपकरणहरूको संग्रह डेलिभर गर्दछौं जुन तपाईं काम गरिरहनुभएको कुनै पनि वेब प्रोजेक्ट वा अनुप्रयोग स्थापना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो Vue. js का लागि एक मटेरियल डिजाइन कम्पोन्ट पुस्तकालय हो, जसले तपाईंलाई सबै क...
शीर्ष +०+ आईको क्रिप्टोकरन्सी WordPress विषयवस्तुहरू
2021-06-24 14:18:51 | वेबसाइट...
एक ICO आला प्रतिभागी बन्न एक महान विचार हो र यसको लोकप्रियताको कारण सफल उद्यमी बन्ने अवसर। हामी यहाँ वेबसाइट सुरूवात र डिजाईन रिफ्रेसको साथ स्टार्टअपहरू र व्यवसायहरू गर्न यहाँ छौं। उच्च रेटिंग र सकारात्मक प्रतिक्रियाको साथ Best० सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टोकरन्सी ICO WordPress थीम्स जाँच गर्नुहोस्। प्रत्येक...
एक विविध र समावेशी मार्केटिंग टीम को नेतृत्व
2021-06-24 12:26:34 | वेबसाइट...
यो लेख बृहत श्रृंखलाको भाग हो जुन मार्केटिंगमा विविधता र निष्पक्षतामा केन्द्रित छ। एक कम्पनीको रूपमा, हामी जातीयता र अन्याय विरुद्धको लडाईमा लिन सक्ने कार्यहरूको पहिचान गर्न प्रतिबद्ध छौं, र BBIPOC को आवाज सुन्नु प्रेरणादायी परिवर्तनकोलागि महत्वपूर्ण छ। यहाँ यस श्रृंखलाका अन्य लेखहरू पालना गर्नुहोस्...
कर्मचारी प्रशिक्षणका लागि शुरुवातकर्ता गाईड
2021-06-22 22:50:57 | वेबसाइट...
कर्मचारी तालिम ज्ञान र प्रतिभा खाली गर्न भर्न, विशिष्ट व्यावसायिक क्षेत्र र कार्यहरूमा प्रदर्शन सुधार गर्न, र रोजगारी सन्तुष्टि र मनोबल बढाउन आवश्यक छ। तर व्यस्त कर्मचारी तालिका, एक तितर बितेको कार्यबल, र बिभिन्न शिक्षा बानीहरू सफल कार्यक्रम रोल आउट गर्नका लागि केही अवरोधहरू हुन्। कर्मचारी प्रशिक्षण...
सर्वश्रेष्ठ LLC सेवाहरू
2021-06-22 22:43:22 | वेबसाइट...
धेरै उद्यमीहरू उत्तरदायित्व दृष्टिकोणबाट आफू र उनीहरूको व्यवसायको बिच एक छुट्टि बनाउन एलएलसी गठन गर्न छनौट गर्छन्। सीमित देयता कम्पनीका मालिकहरूलाई व्यक्तिगत debtsण र मुद्दा चलाउन व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी मानिदैन। त्यहाँ LLC सेटअप गर्ने धेरै तरिकाहरू छन्। यो नयाँ उद्यमीहरूका लागि डरलाग्दो हुन सक्दछ...
ल्यान्डि Page पृष्ठ अप्टिमाइजेसनको लागि शुरुवातकर्ता गाईड
2021-06-22 22:36:15 | वेबसाइट...
एक सफल ल्यान्डि page पृष्ठको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मध्ये एक लक्षित ग्राहक हो। जे भए पनि, यदि तपाइँ सही ठाउँमा तपाइँको पृष्ठमा पहिलो स्थानमा आउँनुहुन्न, तपाइँका सबै प्रयासहरू धुम्रपानमा जान सक्छ। किनकि हामी सक्दैनौं (कानूनी रूपमा! ) मान्छेहरूको दिमाग पढ्न सकेन, बजारहरूले भेट्टाए एक सर्टकट: perso...
कसरी कर्मचारी रेफरल प्रोग्राम सिर्जना गर्ने
2021-06-22 22:28:41 | वेबसाइट...
कर्मचारी रेफरल प्रोग्राम सिर्जना गर्नमा मानिसहरूसँग भएको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दीर्घकालीन सफलता प्राप्त गर्नु हो। जबकि रेफरल प्रोग्रामहरू प्रायः धेरै चर्चा र उत्साहका साथ सुरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई छोटो अवधिमा सफल राख्नु प्राय: गाह्रो हुन्छ। हाम्रो "कसरी गर्ने" प्रक्रिया पढिसकेपछि, तपाइँले कसरी ए...
अवधि भुक्तान गर्न एक शुरुआती गाइड
2021-06-21 00:03:50 | वेबसाइट...
यदि तपाइँ साप्ताहिक, द्वि-साप्ताहिक, द्वि-साप्ताहिक भुक्तान अवधि, वा तीनको संयोजन पनि तपाइँको व्यवसायको लागि सबै भन्दा राम्रो भुक्तान अवधि हुनेछ भनेर कसरी निर्धारण गर्नुहुन्छ? कर्मचारी प्राथमिकताहरू र श्रम कानून जस्ता कारक स्पष्ट विचार हो। तर तपाईं पनि एक फ्रिक्वेन्सी चाहानुहुन्छ जुन शीर्ष प्रदर्शनक...
दुर्गम कामदारहरूको लागि शुरुवातकर्ता गाईड
2021-06-21 00:01:27 | वेबसाइट...
रिमोट वर्किंग भनेको कुनै समय व्यवसायका लागि विरलै थियो, हालको इतिहासमा यो नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ। स्ट्यान्फोर्ड अर्थशास्त्री निकोलस ब्लूमले गरेको अध्ययनले देखाउँछ कि जुन २०२० सम्ममा संयुक्त राज्य अमेरिकामा 42२% कामदार पूर्ण घरबाट काम गरिरहेका थिए। जबकि ती संख्या सम्भव भए पछि काममा फिर्ता संग ए...
मानसिक ट्रिगरहरूको प्रयोग गरेर एक अनुकूलित ल्यान्डि page पृष्ठ डिजाइन गर्नुहोस्
2021-06-20 08:35:10 | वेबसाइट...
ल्यान्डि page पृष्ठको लक्ष्य भनेको आगन्तुकहरूलाई कारबाही लिनको लागि हो, यो उत्पादन किन्नको लागि हो, ईमेल सूचीमा समावेश हुन, नि: शुल्क परीक्षण सुरू गर्न, वा अरू केहि। तर कुनै लक्ष्य जस्तै तपाईले "आशा गर्नुपर्दैन" "यो हासिल हुनेछ। तपाइँलाई एक रणनीति चाहिन्छ जुन चाहिने कार्यहरू लिन आगन्तुकहरूलाई मार्गद...
कर्मचारी बेनिफिटहरू कसरी सेट अप गर्ने
2021-06-19 20:19:38 | वेबसाइट...
व्यापारको आकार जेसुकै भए पनि, कर्मचारीहरूलाई खुसी, वफादार र उत्पादक राख्ने उत्तम तरिकाहरू मध्ये एक उत्तम बेच्ने प्याकेज हो।इनका फाइदाहरू, वा यदि लाभ रेकर्डहरू गलत छैनन् भने यो दुबै पक्षहरूको लागि निराश हो। तपाइँको बेनिफिट कार्यक्रम को लागी एक स्पष्ट सेटअप प्रक्रिया पनी यो निराशा कम गर्न र तपाइँलाई स...
कर्मचारी बोनस योजनाहरूको सुरुवातकर्ताको गाईड
2021-06-19 20:13:50 | वेबसाइट...
कर्मचारी बोनस योजनाहरू नयाँ व्यवसाय लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि काममा उनीहरूको प्रदर्शनलाई सुधार वा कायम राख्नको लागि प्रोत्साहित गर्ने एक उत्तम तरिका हो।परंतु एक कर्मचारी बोनस योजना निर्माण जुन निष्पक्ष र उत्प्रेरक हो सहयोगी हुन सक्दछ। संगठनहरूले प्रदान गर्ने बिचमा सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ। सब...
Best उत्तम सम्बद्ध लिंक मास्किंग प्लगइनहरू (+3सुझावहरू बिक्री बढाउनका लागि)
2021-06-19 14:50:28 | वेबसाइट...
तपाईको WordPress साइटका लागि उत्तम सम्बद्ध लिंक मास्किंग प्लगइनहरू खोज्दै हुनुहुन्छ, तर उत्तम विकल्पको बारेमा निश्चित हुनुहुन्न? एफिलियट मार्केटि in निष्क्रिय आय बनाउनको लागि सबैभन्दा लाभदायक तरीका हुन सक्छ तर तपाइँ आफ्नो साइटको सामग्रीमा सम्बद्ध लिंकहरू इम्बेड गर्ने बित्तिकै, तपाइँ उनीहरूले तपाईको ...
२०२१ मा best 34 उत्तम वर्डप्रेस घटना थिमहरू
2021-06-19 05:38:21 | वेबसाइट...
तपाईंले आफ्नो स्पिकर आरक्षित गर्नुभयो। तपाईंले एक स्थान लक गर्नुभयो। क्यालेन्डर एक T को लागि तालिकाबद्ध गरिएको छ। तपाईंले पाहुना सूची बनाउनु भएको छ र तपाईं आफ्नो निमन्त्रणा पठाउन तयार हुनुहुन्छ। अब तपाईले गर्नु पर्ने कुरा तपाईको भर्खरको घटनाको प्रचार गर्नु हो, र एकल वेबसाईटसँग भन्दा यो भन्दा राम्रो ...